Ny fanompoan-tsampy sy ny fanabeazana
Mpivavaka tena mafana fo no nanodidina ny Isiraely fahizay, dia olona izay feno fanoloran-tena teo amin'ny fanompoana sy ny fampitoniana ireo andriamaniny ka namono, na ny zanany naterany aza, mba ho fanatitra ho an'ireo. Izany ka fanoloran-tena! Sa tsy marina izany?
Izay indrindra no maha-zava-dehibe ny fivavahana, dia ny fivavahana araka ny tokony ho izy, amin'Ilay Andriamanitra tena Izy. Niaro ny vahoaka hebreo tamin'ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana sandoka nanodidina azy mantsy izany. Na teo aza anefa ny fampitandremana rehetra nomena ny vahoaka dia mbola latsaka tao anatin'ny fanompoan-tsampy ihany izy ireo, dia izay efa nandrarana azy fatratra.
Ahoana kosa ny amintsika ankehitriny? Nahoana no zava-dehibe tokoa ny mivavaka amin'Ilay Andriamanitra marina manoloana ny soa rehetra nataony, ary indrindra koa manoloana ny loza ateraky fanompoan-tsampy "moderina"?
Vakio ny Mar. 7:1-13. Inona no hevitra manan-danja hitantsika ao amin'ny and. 7-9, izay azontsika ampiharina eo amin'ny fanabeazana ankehitriny ary mety hanampy antsika ho voaro amin'ny fampianaran-diso avy amin'izao tontolo izao izay mitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainam-pinoantsika?
Maro amin'ireo hevi-dalina voizina eto amin'izao tontolo izao sy ampianarina any an-tsekoly ankehitriny no mifototra amin'ny finoana fa tsy misy Andriamanitra. Midika izany fa hevitra mifanohitra amin'ny Baiboly no ampianarina amin'ny lafiny maro. Mety halaim-panahy hivavaka amin'ireny hevitra hindrahindraina sy ampianarina ary ampiharina ireny isika. Mety ho lolohavintsika toy ny andriamanitra koa ny sain'ireo mpandinika, mpahay siansa, na matematisianina, izay namoaka izany hevitra izany. Ny olana dia matetika no tsy mifanaraka amin'ny fahamarinan'ny Baiboly ireny hevitra ireny kanefa maro ireo mampianatra sy mihevitra izany ho marina. Miezaka mampiditra ireo hevitra ireo ao anatin'ny fanabeazana kristianina ny olona. Fomba tokana ihany anefa no mety hahatanteraka izany, dia ny fileferan'ny finoana amin'ny marimaritra iraisana, izay matetika no midika ho fanolanana sy fanovana ny Soratra Masina mba hahatonga izany hifanaraka amin'ny hevitra voizina amin'izao andro izao.
Inona avy ireo hevitra inoan'ny olona ankehitriny kanefa mifanohitra amin'ny Baiboly? Ahoana no ahafahantsika miaro tena, amin'ny maha-fiangonana, mba tsy isika indray no hampiditra ireny hevitra ireny ao amin'ny rafi-pampianarantsika?